Isaphulelo sokuBalwa kwamanani oGwebu oMatshini wokusika oMatshini kunye neFektri Xiong Ewe
Isakhelo esiphambili somatshini senziwe ngealuminium alloy iprofayile edityaniswe ngamalungu akhethekileyo ngomsebenzi ozinzileyo kunye nokusebenza, ulwakhiwo olusengqiqweni, ukuchaneka okuphezulu, ukusebenza ngokulula nangokufanelekileyo okunokonga ixesha, amandla kunye nezinto zokwenza imveliso; Inokunquma iintlobo ezininzi zamacala amabini kunye nokujikeleza, okusetyenziselwa ukusika ukubumba okujikelezayo kunye namagophe amaninzi afana nezinto zaseYurophu, ibhodi ye-T, ikholamu, i-pellet, njl.
Ngenkqubo yolawulo oluzenzekelayo oluzenzekelayo, umatshini wamkela ibhodi yolawulo lwenqanaba eliphezulu ekhaya ngempendulo ekhawulezileyo, amandla anamandla okuphazamisa uphazamiseko, ulawulo oluphezulu lokuchaneka, ulawulo oluzinzileyo kunye nokusebenza, ukuziqonda ngokwakho ukuxilonga kunye nokukwazi ukuziqhelanisa, njl. inokusebenza imini yonke ixesha elide.
• Inokuzoba zonke iintlobo zamanani nge-CAD / CAM kwikhompyuter kwaye isike ngokuthe ngqo, okanye isike emva kokuba ifayile yokusika iqhutywa kwi-U-disc.
• Ngonxibelelwano olusebenzayo olusebenzayo, umatshini unokubonisa iinxalenye eziza kunqunyulwa, landela indlela yokusika kunye nenqanaba labo elifanelekileyo njengemida, ialam, iimeko zokusebenza ze-axis nganye, njl.
Ngamandla aphezulu kunye nozinzo loyilo loomatshini, umatshini unokusebenza kakuhle ngenkqubo yolawulo lwamanani kwaye akukho mfuneko yokulungelelanisa.
• Umatshini unoyilo lokuhambisa umkhondo kabini ngokuchaneka okuphezulu, okuzinzileyo.
• Ixhotyiswe nge-stepper motor enokulawulwa kunye nokukhawulezisa-i-curves-isoftware ngaphandle komsebenzi ozinzileyo, ummiselo wesantya samahhala, ukuchaneka kolawulo oluphezulu, njl. Njl. Ukwenzela ukuhlangabezana neemfuno zokusika isantya kunye nokuchaneka kwesangqa. Iingcingo ezili-10 zokufudumeza zinokufakwa ngokulandelelana kulawulo lwamanani nakwizibiyeli ezizinzileyo ukuze ibhodi isikwe kwaye yenziwe kube kanye.
• Umatshini uvumela ukutshintshwa kweengcingo ezaphukileyo ngexesha lokusika.
• Ivumela ukuyila zonke iintlobo zamanani-mbini ukwanelisa iimfuno zentengiso.
Egqithileyo Umatshini Ukwaleka
Okulandelayo: Zenzekelayo Cutting Machine